डा. भट्टराईसँग मधेसी मोर्चा
घटना र विचार (न्युज डेस्क) 8 years ago September 7, 2011
व्यवस्थापीका संसद्मा रहेका साना – ठूला २८ दलमध्ये २० दल र एक स्वतन्त्र मुस्लिम सभासद्को मत प्राप्त गरेर अन्ततः ३ सय ४० मतका साथ बहुचर्चित वामपन्थी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको ३५आँै तथा गणतान्त्रिक नेपालको चौथो प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ खाएका छन् । उल्लेखनीय के छ भने घोर वामपन्थी अतिवादी शक्तिको रूपमा उदाएको एनेकपा माओवादीका नेतालाई घोर दक्षिणपन्थी भनेर आरोप खेप्दै आएका मधेसवादी दलहरूको गठबन्धनले पूर्णर्समर्थन गरेको छ । त्यसो त सहमतिको राजनीति आजको नेपालमा अत्यावश्यक मानिए पनि उत्तर र दक्षिणको मिलनलाई भने अनौठो रूपमा हेर्न सकिन्छ । हिजोसम्म भारतीय दलाल भनेर प्रचारबाजी र चर्का भाषण गरिने गरेका तिनै मधेसी नेताको काँधमा चढेर प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने बाध्यता डा. भट्टराईलाई किन पर्‍यो ? बहसको विषय अवश्य हुन सक्छ । आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त मधेस प्रदेश निर्माण गर्ने गरी यसपूर्व भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन गराइदिने र्सतमा हस्ताक्षर गरेरै भए पनि डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका छन् । देशको कायापलट गर्ने आश गरिएका डा. सावको वास्तविक अनुहार त नेपाली जनताले देख्ने नै छन् । नेपाली जनताका सतही आकाङ्क्षा र विश्वासलाई कहाँसम्म पुर्‍याउनेछन्, त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ । नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापापछि गोरखा जिल्लाबाट देशको कार्यकारी प्रमुख बन्ने सुअवसर डा. भट्टराईले नै प्राप्त गरेका छन्, यसको तौल कति हुनेछ त्यो आउने दिनले नै बताउनेछ ।
नेपाली जनताका शान्ति स्थापना गर्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेको देख्ने उत्कट चाहनालाई यो वा त्यो वहानामा बटार्ने, पर सार्ने वा टार्ने दुस्प्रयास नहोस् भन्नेमा आमनागरिक रहेका हुन् । डा. भट्टराईप्रति मानिसको सतही विश्वास उनको बौद्धिक इन्जिनियरिङ दक्षताका लागि मात्र नभएर विकल्पको अन्तिम छनोट हो भनेर बुझ्न उनले सक्लान् नै । जनताको विश्वास पूर्ण लोकलान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा उनको निष्ठा रहोस् भन्ने हो ।
उनको जन्म जिल्ला गोरखाका काङ्ग्रेस तथा लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्ने नागरिकमाथिको दमन अन्य कुनाका नागरिकमा नहोस् । निषेधको राजनीतिलाई बढावा दिँदै आएका डा. भट्टराईले आजैबाट प्रतिस्पर्धा र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई व्यवहारतः लागू गर्नेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ, किनकि यही लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यही विधि र प्रक्रियाबाट उनी त्यो कुर्सी पुगेका हुन् ।
सामाजिक सुरक्षाका नाममा राष्ट्रको ढिकुटी अञ्जुली फैलाएर दिलदार किसिमले वितरण गर्ने कम्युनिस्ट शैली र राष्ट्रको ठेक्का आफूले मात्रै लिएको ठानेर ढिकुटी अड्कली ? अड्कली जिम्मेवार बनेको बताउँदै मुठ्ठी कसेर सम्पत्ति थुपारेर राख्ने काङ्ग्रेस ? शैलीको बीचमा भएको प्रतिस्पर्धामा राजनीतिक चतुर्‍याइँका साथ डा. भट्टराईले नेपालका उन्नत राजनीतिक खेलाडी ठानिएका विजयकुमार गच्छेदार, जेपी गुप्ता आदिलाई कसरी आफ्नो वशमा पार्न सफल भए त ? एउटा अचम्म भएको छ । तराई मधेसका नेताहरू सत्तामा रहँदा दैनिकी क्रियाकलापमा रमाउने र सत्ताबाहिर रहँदा मधेसका जनता सम्झने पुरानै शैलीलाई शङ्काको फाइदा दिएका होलान् सायद कम्युनिस्ट नेताले ।
आफ्नो नेतृत्वकालको सात महिनासम्म भारतको भ्रमण निम्तो नपाएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको एक घन्टामा बधाई तथा भारत भ्रमण निम्तो प्राप्त गर्ने डा. भट्टराईबीचको अन्तर के हो ? एउटा र्सार्वभौम राष्ट्रको जीवनमा कार्यकारी प्रमुख राम वा श्याम जो भए पनि असल छिमेकीलाई के असर पर्छ त लोकतन्त्रमा ? बहसकै विषय अवश्य होला । ‘नयाँ संविधान लेखिने वा नलेखिने के होला’ भन्ने प्रश्नका बीच रहेर सारा नेपाली चिन्तित देखिन्छन् । अति महत्त्वाकाङ्क्षाले छिट्टै निराशा ल्याउँछ भन्ने मान्यतालाई सम्झने हो भने अबको सम्भाव्यताबारे विश्लेषण गर्नु उत्तम हुन्छ होला । हो, तीन महिनाका लागि संविधानसभाको म्याद त थपियो । तीन महिनामा संविधान बन्ने छैन । यसका आधारहरू अवश्य छन् । प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतीय व्यवस्था, समानुपातिक वा मिश्रति निर्वाचन प्रणाली, जातीय वा स्रोत र पहिचानको आधारमा सङ्घीयता निर्माण गरिने, आत्मनिर्णयको अधिकार दिने कि नदिने, मधेस स्वायत्त हुने कि नहुने । ब्राह्मण, क्षेत्रीको पहिचानलाई के गर्ने, धर्मनिरपेक्षताबारे के गर्ने, बहुलवादी या एकलवादी लोकतन्त्र कस्तो राख्ने यी आदि कारणले संविधान बन्दैन । यो ६०१ जनाले काम गर्न नसकेपछि संविधान मस्यौदा सुझाव आयोग बन्न्ा सक्नेछ । त्यसपछि संविधानसभा विघटन हुनेछ मङ्सिर १४ पछि । नयाँ चुनावका लागि चुनावी सरकार बनाउनुपर्नेछ । सो सरकारले गराएको व्यवस्थापिकाको बैठकद्वारा आयोगले दिएको मस्यौदामा छलफल गरी संविधान घोषणा हुनेछ । यो नै अन्तिम र उत्तम विकल्प हो । जातीय राजनीति सहायत कम्युनिस्टहरूलाई पनि आवश्यक छैन । यो त वर्गीय कुरा हुनुपर्ने हो, नेताहरूले कुरा बुझ्लान् । त्यसो हुँदा डा. भट्टराईको भूमिका राष्ट्रप्रेमी नै हुनेछ । देशलाई जातीय द्वन्द्वबाट मुक्त राख्दै राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउन उनको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको खोजी गर्नु सहायता अत्युक्ति हुँदैन होला ।
? युवराज बस्ताकोटी, गोरखा
अध्यक्ष प्रचण्डज्यूमा विनम्र अनुरोध
राज्य संरचना नाम लुम्बिनी अवध थारू राख्नुको सट्टा लुम्बिनी प्रदेश मात्र नाम दिएर मूल भाषाहरूबारे भित्र संविधानमा जे ? जे लेख्नर्ुपर्ने हो लेखे भइहाल्छ । नेपालमा जस्तै भोलि भारतमा पनि अवध प्रदेश कायम भएपछि कालान्तरमा १० ? १२ ? १५ वर्षपछि दुवै अवध मिलेर बेग्लै अवध राष्ट्र, त्यस्तै भोजपुरा राष्ट्र माग नहोला भन्न सकिन्न । यसरी लङरनमा भारत पनि डिस्टर्भ । तर्सथ राज्य संरचना नाममा जात, भाषाको कुरा ल्याउनु नै हुँदैन । जात, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग समावेशचाहिँ हुनुपर्छ, यो सबै दलले चाहेकै छन् । माओवादीलगायत सम्पूर्ण दल यस तथ्यबारे गम्भीर हुनु जरुरी छ, जुन नेपाल तथा भारत दुवैको दर्ीघकालीन हितमा हुनेछ ।
? निवेदक, प्रसन्नकुमार कोइराला
सक्रिय सदस्य, नेका
मेची आमाको अवसान
‘मेची आमा’ विशेष नामले प्रख्यात नेपाल राष्ट्रप्रति समर्पित समाजसेवी महिला नेतृ दिलकुमारी श्रेष्ठको अवसान भएको छ । ९७ वर्षको लामो जीवनयात्रामा मेची आमाले राष्ट्रप्रति पुर्‍याउनुभएको योगदानको स्मरण र लेखाजोखा हुनु भविष्यका पिँढीको प्रोत्साहनका लागि समेत आवश्यक देखिएको छ ।
नेपालको स्वतन्त्रताका लागि अग्रणी भूमिका खेलेको भोजपुर जिल्लास्थित ऐतिहासिक दावाँ बजारमा जन्मनुभएकी मेची आमाको विवाह चैनपुरनिवासी कृष्णप्रसाद श्रेष्ठको साथ भएको हो । चैनपुरको स्थायी बसाइले मात्र महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा नहुने भएकोले उहाँलाई तत्कालीन औलोग्रस्त झापा जिल्ला पुर्‍यायो । वैज्ञानिक प्रविधिको विकासले देशभरि नै औलो उन्मूलन भएकोले पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा सूर्य उदाउँदा पहिलो झुल्कोले स्पर्श गर्ने भद्रपुर प्रकाशनगरमा कार्यक्षेत्र बनाउने सौभाग्य पाउनुभयो ।
२००७ सालको सफल जनक्रान्तिले झापामा पनि ठूलो हलचल र जनजागरण पैदा गरायो । महिला सशक्तीकरणको बाटोमा महिलाको हकहित र समाजसेवाको क्षेत्रमा पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षो शासनकाल र त्यसपछि पनि अग्रपङ्क्तिमा रही जीवनपर्यन्त कार्यरत रहनुभयो । भद्रपुर प्रकाशनगरस्थित उहाँको घर ? आँगनमा बोक्सीको बात लगाइएकी लोग्नेले सौता हालेर ब्याइतेलाई खान ? लाउनसमेत नदिई कुटपिट गरी नीलडाम पारिएका विधवाहरूका जग्गाजमिन हडपिई आँसु कडाएर घर – घर रुवाइएको समेत धेरै अवला र अदना महिलाको घुइँचो लाग्ने गरेको पङ्क्तिकारले खुद देखेको हो । अड्डा अदालत धाएर महिलालाई न्यायनिसाफ दिलाउनु आमाको दिनचर्या नै बनेको थियो । पीडित महिलाको हकहितको कार्य गर्दागर्दै मेचीआमाको लोकप्रियता चुलिएर अधिराज्यव्यापी हुन गयो । त्यसैले झापा जिल्लाबाट प्रकाशित हुने ‘विवेचना’ साप्ताहिक पत्रिकाले ‘मेचीआमा’ संज्ञा दिएको सार्थक र औचित्यपूर्ण हुन आएको छ ।
वास्तवमा मेची आमा युगद्वारा स्थापित एक युगकी नेपालकी महिला नेतृ हुनुहुन्छ । युगले निर्धारण गरेको बाटेमा हिँड्ने तथा युगलाई साथसाथै डोर्‍याएर हिँडाउन सक्ने अभूतपर्ूव क्षमता उहाँमा थियो । आज १४औँ दिनमा मेचीआमाप्रति हारि्दक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति हारि्दक समवेदना व्यक्त गर्दछौँ ।
-माधवप्रसाद श्रेष्ठ (दावाँ), नयाँबानेश्वर,
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (६ मङ्सिर शुक्रबार २०७६, २२ नोभेम्बर २०१९)
निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत क्रियाकलाप रोक्न काङ्ग्रेसको माग
साधारण तारेखमा रही पुर्पक्ष गरि पाउन महराले गुहारे उच्च अदालत
सीमा जोगाउन क्षत्री समाजको ज्ञापन
यस्ता सन्तानले कसरी पुछिदेलान् नेपालआमाको आँशु ?
थामिएन नेप्सेको ओरालो यात्रा, आज करिब ८ अंकले घट्यो
राजपाको संयोजकमा पुनः राजेन्द्र महतो
‘दर्शनावली’ भाग-६ प्रकाशित
उसुमा १० स्वर्ण हात पर्ने दाबी